विवाहअघिको अवैध सम्बन्धलाई छिपाउन युवतीहरुको यस्तो काइदा
विवाहअघिको अवैध यौनसम्बन्धलाई छुपाउनका लागि खासगरी सहरीया भारतीय युवतीहरु रिभर्जिन बन्ने गरेको खुलासा भएको छ । जुन युवतीको विवाह अघि नै अवैध सम्बन्ध कायम भएको छ, उनी अब सर्जरीको सहायताले पुन: भर्जिन बन्दै पतिसामु कुमारीको रुपमा पेश हुन चाहन्छिन् ।
विवाहको सिजनमा ज्यादा डिमाण्ड, महिनामा सरदर २० केश
रिभर्जिनिटीको यो दौडमा कतिपय विवाहित महिलाहरु पनि छन् । उनीहरु विवाहको १५औं र २५औं वार्षिकीमा पतिलाई यस्तो उपहार दिएर फिदा बनाउन उद्दत रहने गरेको पाइएको छ ।
भारत चण्डीगढका प्लास्टिक सर्जन डा. दिपक कालिया भन्छन्, ‘सातामा चार-पाँचवटा यस्तो सर्जरी भइरहेको छ । विवाहको मौसममा यसको डिमाण्ड बढ्ने गरेको छ । हामीकहाँ महिनामा सरदर २० वटा यस्ता केश आउने गरेका छन् ।’ यसरी पुन: भर्जिन बन्नका लागि गराइने सर्जरीमा ४५ हजार भारु बराबरको खर्च हुन्छ ।
भारतमा मात्रैं होइन अन्य कैयन देशमा यस्तो सर्जरी लोकप्रिय छ । खासगरी मुस्लिम देशमा युवतीहरु यस्तो सर्जरी गराउँछन् । महिलाहरु प्रति निकै निर्मम र रुढीग्रस्त मुस्लिम सम्प्रदायमा यस्तो शल्यक्रिया लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
इण्डियन सोसाइटीमा यदि कुनै युवतीले विवाह अघि नै सारीरिक सम्बन्ध कायम गरेको थाहा भएमा उनको वैवाहिक जीवनमा नै तुफान आउँछ । सोही कारण सहरीया युवतीहरु रिभर्जिनिटीका लागि यस्तो शल्यक्रिया गराउन लालायित छन् ।
यस प्रकारको हाइमनोप्लास्टी सर्जरीका लागि फेमस डा. दिपक कालियाले भने, ‘यस्तो सर्जरीको कन्सेप्ट पूरानै हो । पहिले निकै कम युवतीले यसप्राकारको सर्जरी गराउने गरेका थिए । अहिले त्यो स‌ंख्यामा काफी बढोत्तरी भएको छ ।
उनले छिमेकी देशहरुबाट पनि यो सर्जरीका लागि युवतीहरु आउने गरेको बताए । तर कुन-कुन छिमेकी देशबाट भन्ने उनले कुनै उल्लेख गरेनन् । आजकल खासगरी चण्डीगढका युवतीहरुमा रिभर्जिनिटी सर्जरी गराउने ट्रेण्ड नै चलेको छ ।
यस्ता छन् काँक्रोका फाइदाहरु
धेरै तनाव लिने बानीले घट्न सक्छ स्मरणशक्ति
चाहे धर्ती किन नउल्टियोस्, महिलाले बताउँदैनन् यी पाँच रहस्य
युवतीसँग यी पाँच कुरा चाहन्छन् नवजवानहरु
जीवनसाथीको अवैध सम्बन्धबारे यसरी थाहा पाउनुहोस्
अनौठा यी २२ ओछ्यानलाई हेर्नुस्, अनि आफ्नोसँग तुलना गर्नुहोस् (फोटो फिचर)
पुरुषले महिलालाई किन धोका दिन्छन् ? पढ्नुहोस् ७ कारण
के तपाईंलाई थाहा छ बुद्धि बढाउने यी ८ तरिकाहरु
जीवनको मूल्य कति ? बुद्धको यो जवाफले फेरिदिनसक्छ तपाईको पनि जीवनदृष्टि
प्रेमिका वा श्रीमतीलाई फकाउने गज्जबका पाँच काइदाहरु
यी हुन् ती ५ कुरा, जसका कारण धोखा खान्छन् पुरुषहरु !
महिनावारी सम्बन्धी विश्वभर यस्ता छन् अनौठा परम्परा
गोलभेंडा खानुहोस्, यी फाइदा पाउनुहोस्
यस्ता छन् धनप्राप्ति हुने केही शुभ संकेत
तातो पानीले नुहाउने बानी छ भने यस्ता कुरा ख्याल गर्नुहोस्
किन टाँगिन्छ ढोकामा कागती र खुर्सानी ? यस्तो छ वास्तविक कारण
खुलेर हाँस्नुहोस्, यस्ता छन् फाइदाहरु
विहान सबेरै उठ्नमा समस्या हुन्छ ? यी कुराहरुको पालना गर्नुहोस्
श्रीकृष्णका यस्ता १० वाणी जसले तपाईंलाई छिट्टै सफल बनाउनेछ